3 Daawooyinka dabiiciga ah ee Kahortaga Qabatinka Nikotine - Caafimaadkaaga Hagaaji - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah »3 Daawooyinka Dabiiciga ee Loogu talagalay Isticmaalka Maandooriyaha - Kordhin Caafimaadkaaga
Qabatinka nikotiinta waa dhibaato culus. Sigaar cabayaal badan ayaa jecel inay joojiyaan dhaqankan waxyeellada leh. Sikastaba, balwadda ay maandooriyahaani u keento tubaakada ayaa ka sii adkaanaysa.
Maanta, waxaan heysanaa ilo badan oo ka badan sharoogada nikotiinta ah ee lagu joojiyo sigaar cabista. Waxaan sidoo kale ku kalsoonaan karnaa daaweynta dabiiciga ah. Iyagu waxay noqon karaan ikhtiyaar inaga caawiya inaan gaarno hadafkeena
Daaweynta dabiiciga ah ee looga gudbo qabatinka nikotiinta
Daaweynta dabiiciga ahi waa bedelka weyn ee looga gudbi karo qabatinka nikotiinta. Waxaan ogaan doonnaa xulashooyinka qaarkood. Runtii waxaa jira dhir iyo xeryo kale oo waxtar badan leh.
Si aad u aragto: Dhirta dawooyinka si loo yareeyo caloosha
Ka gudubka qabatinka nikotiinta leh cytisine
Qodobka Deb Que deben saber the cardiólogos del tratamiento farmacológico para dejar de fumar? (Maxey tahay inay aqoonyahanada wadnaha ogaadaan dawada joojinta sigaar cabista? ee joornaalka 'Uruguayan Journal of Cardiology', waxay muujineysaa in cytisine waa ikhtiyaar dabiici ah oo lagula tacaali karo qabatinka nikotiinta. Tan waxaa lagu muujiyay daraasad caafimaad.
Cytisine waa soosaarka shinnida geedka Cytisus laboinum. Tan waxaa horay loogu isticmaali jiray waddammada Soofiyeeti dadka in ay joojiyaan sigaar cabista. Ikhtiyaar dabiici ah oo loo isticmaalo sida soo socota:
Cytisine wuxuu ku yimaadaa qaab kiniin ah
Kiniiniyada 6 waa in la siiyaa inta lagu jiro maalmaha ugu horreeya ee 3
Waxaan si tartiib tartiib ah u yareynaa qaddarka laga bilaabo maalinta saddexaad
Soosaarashada warshadan waa in la cunaa ugu badnaan 25 maalmood. Tani waa muddada la qiyaasey in laga gudbo qabatinka nikotiinta. Waxaan kugula talineynaa qaadasho joogto ah sida lagu caddeeyay qiyaasta qaadashada. Sidoo kale waa muhiim inaad la tashatid dhaqtarkaaga kahor intaadan bilaabin qaadashada.
Sidoo kale akhri: Dhirta lagu joojiyo sigaar cabista
1. Ku jooji sigaar cabitaanka kudzu
Kudzu (Pueraria Lobata) waa ikhtiyaar kale oo looga gudbi karo qabatinka nikotiinta. Waxaan u isticmaalnaa tan xididka geedkan. Dhismooyinkeeda ayaa xakameynaya nidaamka abaalmarinta, oo dhiirrigelisa yareynta isticmaalka nikotiinta.
Siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaali karaa daawaynta dabiiciga ah. Waxaan kugula talineynaa inaad dooratid ikhtiyaarka kugu habboon.
Kiniiniyada: waa inaad ku bilowdaa kiniiniyada '5 6' maalin kasta oo si tartiib tartiib ah loo yareeyo isticmaalkaaga
Powder: waxaad ku dari kartaa cuntadaada ama ku milmi kara galaas cabitaan ah. Kuma talineyno inaad ku cabto hal galaas oo biyo ah. Runtii, dhadhankeeda ayaa noqon karta mid aan fiicnayn
Soo bixi: qaab dhibco ah, inaad ku shubto hal galaas oo biyo ah ama si toos ah u cuno. Tusaale ahaan, 2 wuxuu u dhacaa inuu ku cabbo shaaha
2. Adeegso homeopathy
Ugu dambeyntiina, thehomeopathy waa daaweyn dabiici ah oo looga gudbo qabatinka maandooriyaha. Waa ikhtiyaar bixin kara natiijooyin aad u fiican
Homeopathy-gu waa dawo dhammaystiran. Taas macnaheedu waa inaan raaci karno iyada oo la raacayo xulashooyinka aan hore u soo sheegnay.
Granotathic granules waa la qoray oo aan lahayn wax ka hortag caafimaad ah. Waxaan kaloo isticmaali karnaa Ubax ubaxa.
Fiiro gaar ah: Daawooyinka kale ee loogu talagalay ku tiirsanaanta tubaakada si buuxda ugama ansaxin daraasadaha sayniska. Taasi waa sababta ay tahay in loo qaado kormeerka takhtar takhasus leh oo na hagi doona.
Aaminaadda ah in xulashooyinkaan dabiiciga ah kaligood ay naga caawin doonaan sidii aan uga gudbi lahayn qabatinka nikotiinta waa qalad culus. Waa muhiim in xoogaa la geliyo inaad lahaato ujeedka iyo inaad ka digtoonaato in walwalku iskiis u muuqan doono marar badan.
Xaaladdan oo kale, waa inaan isticmaalnaa awooddeena dardaaranka iyo naga caawi kheyraadka aan soo sheegnay. Ku kalsoonida awooddooda si ay uga gudbaan qabatinka maandooriyaha ayaa muhiim u ah tani inay dhacdo.
Jooji sigaarka ma fududa. Tani waa sababta aan kugula talineyno inaad ka fogaato meelaha kugu celin kara si fudud. Tusaale ahaan, haddii aad aado baarar, ha aadin aagga sigaarka lagu cabbo. Tani way ku caawin doontaa.
Waxaan rajeyneynaa in qodobkaani uu kuu anfacay. Waxaan hubnaa inaad sida ugu dhaqsaha badan uga gudbi doontid qabatinkaaga balwadda si aad gebi ahaanba u joojiso cabista sigaarka. Maxaa adiga kuugu adag?
Jooji sigaar cabista: 4 xeerarka la raaco
Joojinta sigaarku waa geedi socod adag oo qofkasta uu wajaho qaabkiisa. Waxaa jira qaar ku sameeya qaab horumar iyo qaab gacmeed ah, Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/3-therapies-naturelles-contre-la-dependance-a-la-nicotine/
Cunnooyinka 5 si loo Hagaajiyo Waxqabadka Kelyaha - Hagaajinta Caafimaadkaaga
DADKA & LIFESTYLE2,987